रुरु क्षेत्र परिचय – Chakra Jwala
Previous Post HSEB रिजल्ट कसरी हेर्ने??
Next Post एउटा बिछोडको कथा (अवस्य पढ्नुहोला)
7 thoughts on “रुरु क्षेत्र परिचय”
रूरू क्षेत्रको जानकारी र यसको महत्व
अनि इतिहासको बारेमा खोजमुलक लेख प्रकाशित गर्नु भएकोमा धन्यवाद !!!
19 Jul 2017 at 5:31 pm
धन्यबाद, अन्य लेखहरुको लागि हेर्दै गर्नुहोला
17 Jan 2017 at 5:17 pm
अति उपयोगी लेख ।
4 Sep 2016 at 12:28 pm
Informative and well writtent!!!
7 Sep 2016 at 11:43 pm
Pingback: गुल्मीको रुरु क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने तयारी — Ujyaalo Lalteen
4 Nov 2016 at 7:28 pm
thanks for comment! तपाईंको पोष्ट राम्रो छ, मैले पढेँँ । फोटोको र तल दिइएको लिङ्कको स्रोत जनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।